Oromo News: 03.26.2021 | KWIT
Haala corona virus irrati bahu kan mullisu national trend irratti torbaan kana baay’achuu akka jiru himan. State guyyaa har’aa akka gabaasetti namni Covid-19 due 19 fi kan haarawa qabame ammo 907 akka tae gabaasan. Namni hospitaala galuu ammo haala muraasan dabalu jira. State talaali corona virus million 1.37 kan kennan yoo tau jiraattoni biyyaa 877,000 kan ta’an talaali fudhatani jiru. Hang ammaati, state keessati parsantiin jiraattota 16.8% ta’an talaali guutuman guututi fudhatani jiru. Health experts sprin weather irrati Virus hin xiqqaata jedhani abdii kaahachun kan laafisanif itti muufatani jiru.
Guyyaa wiyxata filannoo Iowa 2nd district buaa isaa irrati house committee kan hin murteesine ta’a. House Speaker Nancy Pelosi akka jetteti guyyaa kaleessa akka dubatanitti kuni nita’a jedhanii abdatanii turan garuu kan garagale tae.
House Committee district Rita Hart tan Democratic irrati Republican Mariannete Miller-Meeks harka jahaan erga hin jifatee booda result madaalu Jirani. Congres jia January keessa yeroodhaf Miller-Meeks kan taae ture yootau Hart ammo wayta wal mormii kan toohattan turan yoo tau akkasumas warqaa filannoo 22 kan sirrii hin taane keessa akka jirus himan.
Ilaalchi haaran tokkoo akka agarsisuti yeroo amma mootummaan naanno mirga ulfaa baasu hin argamsiisu kan jedhu irrati fooyya’insa seeraa akka godhan dhiibba kan taasisan jiraattota Iowa keesssa harka tokko sadaffaa gad kan ta’aniidha. Seera tumtoonni Iowa warren tooanna reuplicanota jala jiran fooyyainsa kana raggaasisuufis dalagaa jiran
Akkaata oduu Des Moines Register/Medication, irrati Iowa result filannoo wagga darbee haala xiqqoodhan paranrii 33% yoo tau wagga kanamoo kara parsantii 31 gad xiqqaate jira. Falmitooni dabalanii jiru, kana dura parsantii 58% kan ta’an jiraattonni Iowa amma mormitoota akka ta’an himan, wagga dura kan jiru parsantii 54 ture. Kanneen hafan parsantii 11% kan ta’an deebi isani irrati itti amanamuma akka hin qabne himan.